डा. भगवान कोइराला भन्छन्- अन्डा खाँदा होस गरौं ! -
अध्ययन अनुसार, अन्डाको सेतो भागमा भएको अवयव ‘पेप्टाइड’ हुन्छ । यो प्रोटिन निर्माणको प्रमुख तत्त्व हो । यसैले रक्तचापलाई कम गराउँछ । यो ‘क्याप्टोप्रिल’ (रक्तचापको औषधि)को एक मात्राजति नै प्रभावकारी हुन्छ ।
यसरी ठिक पार्नुहोस् फुटेको कुर्कुच्चा, ३ सरल…